Coronavirus / COVID-19 | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ahụike Mbụ nke Ahụike
Ị nọ ebe a: Home > Coronavirus (COVID-19
Nyefe ọrụ anyị n'oge ọrịa COVID-19
Ọtụtụ agbanweela n'oge na-adịbeghị anya, mana anyị na-aga n'ihu ịza mkpa nke ndị ọrụ anyị n'ofe ọrụ ahụike na ọrụ mgbaka.
Anyị na-enye ọtụtụ nkwado na ndụmọdụ site na ekwentị; ọ bụrụ n’echiche na ị ga-achọ ịgwa mmadụ okwu, biko lee n’okpuru nọmba ekwentị ịkpọ oku.
Na mgbakwunye na ekwentị na nkwado email, a na-enye ụfọdụ ọrụ ihu na ihu site na njikọ vidiyo na teknụzụ ndị ọzọ. E depụtara nkọwa ndị a n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa dị ugbu a nke BLG Mind, biko kpọtụrụ onye ọrụ ị na-enweta nkwado site na ịnweta enyemaka ị chọrọ.
Ndị na-elekọta mgbaka na-akwado
Ọrụ ndị a dị maka ndị na-elekọta ndị nwere isi mgbaka, na-enye usoro ịgbagọ na ndụmọdụ.
Ozi na nkwado maka ndị bi na Bromley: 020 3328 0366
Ozi na nkwado maka ndị bi na Lewisham: 020 3228 5960
Ozi na nkwado maka ndị bi na Greenwich: 07742 407189
Nlekọta ahụike, nkwado mmụọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Ọrụ ndị a:
Nyere ndị mmadụ aka ijikwa ahụike ọgụgụ isi ha na ahụike ha n'oge ntiwapụ site na ị na-ege ntị, nkwado na ndụmọdụ maka usoro ịnagide usoro.
Nyere ndi mmadu aka ijiko aka na uzo ozo nke nkwado na ihe ndi obodo.
Ndị bi na Bromley
Bromley Ọfọn na-akwado ndị mmadụ na Bromley na-enwe ahụmịhe nke mgbatị ahụ ike uche dị oke ala. Maka nkọwa zuru ezu banyere ọrụ ha na-aga n'ihu, lee Nkwado n'oge mkpuchi COVID-19. Kpọtụrụ: 0300 330 9039 / email spa@bromleywell.org.uk or wellbeing@bromleywell.org.uk.
Ọrụ Bromley Iweghachite
Ọrụ Bromley Iweghachite nwere a Iweghachite College, Ọgbọ Nkwado Group na Nkwado Ọrụ. Ọrụ niile nke Iweghachite na-arụ ọrụ ka dị, ọ bụ ezie na emegharịrị maka mkpọchi. Ha na-aga n'ihu na-enye Ọgbakọ ahụike gbasara ọgụgụ isi n'ịntanetị n'oge a. Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere kọleji ahụ na otu ọ ga-esi kwado gị, biko kpọtụrụ 07745 182738/07718 445559 / mgbake.works@blgmind.org.uk.
Bromley Recovery College na-aga n'ihu na-enye nkuzi na otu dị n'ịntanetị n'oge a: lee usoro mgbụsị akwụkwọ.
Kọleji ehiwekwala otu WhatsApp maka ụmụ akwụkwọ kọleji iji nye aka ịkekọrịta ndụmọdụ na echiche. Maka nkọwa ndị ọzọ biko kpọtụrụ: 07787 412856.
Lewisham Community Ọdịmma na-akwado ndị okenye na Lewisham iji gbakee n'ọrịa ọgụgụ isi wee dịrị mma. Ha na-aga n'ihu na-enye 1: 1 nkwado ekwentị, gụnyere ndụmọdụ na nduzi.
A na-anabata ndị na-ezo aka, na ntanetị na ekwentị na-echekwa nkwado na nkwado na-aga n'ihu. Kpọtụrụ: 020 3228 0760 / kọntaktị@lewishamwellbeing.org.uk.
Oge mmeghe na - Monday - Friday 9 am - 5pm na - ewepu ezumike ezumike.
Ndị bi na Greenwich
Mindline na-enye ndụmọdụ maka ndị okenye nọ na Greenwich, na-enye ebe nchekwa na nchekwa iji chọpụta nsogbu ọ bụla ị nwere ike ịnwe.
Oge uche Mindline:
Mọnde - Fraịde: 10.30 - 4.30pm
Tuesday na Tọzdee: 6 pm - 9pm
Satọde: 10.30am - 1.30pm
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ndụmọdụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma, biko hapụ nkọwa gị gụnyere akara ekwentị gị na adreesị ozi-e na ekwentị nzaghachi ndị ndụmọdụ anyị ga-akpọghachi gị. Anyị nwere ndị ndụmọdụ na-asụ Bekee, French, Polish, Punjabi na Hindu ya biko mee ka o doo anya ihe ị chọrọ. Aha njirimara: 020 8853 1735 / mindline@blgmind.org.uk.
Ọdụdọ na-aba-okwu ndụmọdụ, gụnyere omenala kpọmkwem ndụmọdụ ndị mmadụ si Asian, Afrika, Afrika-Caribbean na Eastern Europe nzụlite. Aha njirimara: 020 8853 1735 / greenwich@blgmind.org.uk.
Greenwich Ọgbọ nkwado Onodi
Fọdụ ndị otu na-akwado ndị ọgbọ anyị na Greenwich dị ugbu a n'ịntanetị. Kpọtụrụ: 020 8123 6461 / JonPaul.mountford@blgmind.org.uk.
Nkwado maka nne na nna na nna ọhụrụ
Ndị nne na nna anyị nwere uche na ịbụ nna na-enyere ndị nne na nna aka na-atụ anya nwa ma ọ bụ bụrụ nne na nna ọhụrụ. Nke a gụnyere ịkwalite ahụike na nkwado ndị ọgbọ na-eweta na ntanetị.
Maka nkwado ụmụ nwanyị, kpọtụrụ Mindful Mums Project Worker maka mpaghara gị ma ọ bụ chọta nkọwa nke ndị otu anyị nọ na mpaghara gị site na ịpị mpaghara ịchọrọ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyi, anyị na-emekwa ọrụ ọbụbụenyi na Bromley: 07885 975129.
Maka nkwado ụmụnwoke n'ebe niile kpọtụrụ: 07704 536424 / beingdad@blgmind.org.uk.
Iji kpọtụrụ onye nhazi ọrụ ngo: 07764 967933 / mindfulmums@blgmind.org.uk.
Ozi ndi ozo banyere Bụ Nna.
Ndị ọgbọ dị iche iche
Ugbu a, anyị na-enye ọtụtụ nkwado ekwentị na ndị otu na-edu ndú na ntanetị na ntanetị. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, biko kpọtụrụ 020 8289 5020 / mgbake.works@blgmind.org.uk.
Anyị na-aga n'ihu na-enye enyemaka maka ndị nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na-agba mbọ ijigide ọrụ ha ma ọ bụ na-achọ ịlaghachi ọrụ.
Na Bromley, anyị na-enye nkwado ọrụ site na Ọrụ Mgbake ijere onye ọ bụla nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi chọrọ ịkwadebe maka ọrụ ma ọ bụ nwee nchegbu gbasara idebe ọrụ ha. Kpoo 020 8289 5020 / mgbake.works@blgmind.org.uk.
Ozi Greenwich na nkwado
Ijikọ obodo Alliance
Ijikọ obodo Alliance na-enye nkwado ndị mmadụ maka ndị bi na Greenwich. Ọrụ ndị ahụ gụnyere ndụmọdụ, nduzi na ntinye aka na mpaghara dịka uru, ụlọ na ịnweta ọrụ ndị ọzọ n'ime mpaghara. Kpọtụrụ: 07742 407193 / Paul.Gadsdon@blgmind.org.uk.
Enweta nkwado na Bromley
Ọ bụrụ na ị na-enweta nkwado na uru sitere n'aka anyị ugbu a, biko gaa n'ihu na-eji otu nkọwa kọntaktị ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkwado na uru elele ọhụụ ọhụrụ, kpọọ Bromley Well na 0300 3309 039.
Ọzụzụ & ndụmọdụ
Anyị na-enye ọzụzụ ọzụzụ anyị na mpaghara ọgụgụ isi na isi mgbaka n'ịntanetị. Anyị nwekwara ike ịnye ndụmọdụ gbasara ozi email na ekwentị. Maka ozi ọzọ, lee nke anyị ọzụzụ peeji nke.
1: 1 Nkuzi maka ndị nlekọta
Ozi si n'aka onye isi anyị
Ozi sitere n’aka onye isi anyị, Ben
Banyere MindCare Team
Ihe na ndi otu
Ndụmọdụ Africa na Africa-Caribbean
Bụrụ Onye Otu
Omume Anyị Na-ahụ Ihe Isi Ike na Nlekọta Anya
Ihe omume nzuzu nke Bromley
Bromley Dementia Nkwado Hub
Bromley Dementia Nkwado Hub Partners
Bromley Dementia Support Hub mara ọkwa nzuzo
Umu Bromley nwere uche
Bromley Mindful Mums Otu di iche iche
Bromley Ọgbọ Nkwado
Bromley Recovery Co-ordinator Ọrụ
Bromley Iweghachite College
Bromley Iweghachite College Summer 2021 Prospectus
Ọrụ Bromley Iweghachite - kọntaktị na ndị na-ede aha
Bromley Recovery works nzuzo
Ijikọ obodo Alliance (CCA)
Kpọtụrụ Lewisham Dementia Support Hub
Mepụta profaịlụ gị n'ịntanetị
Ndụmọdụ Dementia na Nkwado
Ọrịa Nwere Uche
Mee ego nke gị
Ndụmọdụ nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe
Ọrụ Ndị Ọrụ Ọzụzụ
Nkwado Ọrụ (IPS)
Peeji Omuma na Modulu niile
Agbatịwo nkwado maka ndị ọrụ nlekọta
Nzukọ Ọzụzụ Ndị Ezinaụlọ
Ndị Fantastic Enyi A Họpụtara Maka Awards
Nchịkọta ego n'ụlọ
Nchịkọta ego n'ụlọ akwụkwọ
Nchịkọta ego na Ọrụ
Inweta mmụọ site na nchịkọta ego nke ndị ọzọ
Nweta ntuziaka Wills anyị na-akwụghị ụgwọ
Onyinye na Wills FAQs
Inye na Ememme
Greenwich Uru Assessment Nkwado Kpọtụrụ Formdị
Ọrụ Nkwado Greenwich Dementia
Greenwich Nwere Obi Uche
Ndi Greenwich Mindful Mums di iche iche
Nkwado ndị ọgbọ Greenwich
Otu esi ahapu onyinye gi
Otú Onyinye Gị Pụrụ Isi Nyere Aka
Ọrụ na Volunteering FAQs
Lewisham Community Wellbeing Ndị Mmekọ
Lewisham Community Wellbeing mara ọkwa nzuzo
Lewisham Dementia Nkwado Hub
Lewisham Dementia Nkwado Hub Partners
Lewisham ndị nwere uche
Lewisham nwere uche Mums Otu dị iche iche
Lewisham Ọgbọ Nkwado
Mee onyinye na ebe nchekwa
Mee onyinye mgbe niile
Ebe nchekwa Lane Café
Izu Izu Iche Iche Isi nke 2021 - okike na Bromley
Izu Izu Iche Iche Isi nke 2021 - okike na Greenwich
Izu Izu Ike Ọgụgụ Isi nke 2021 - ọdịdị na Lewisham
Izu Izu Iche Banyere Uche, 10-16 Mee 2021
MindCare Dementia na-ezu ike n'ụlọ
Onye nwere uche
Ndị nwere uche na-echebara echiche ma na-abụ nna nzuzo
Minds Mums Online Oge
Ndụmọdụ ekwentị Mindline
Ibe edokwubara m
Profaịlụ m n'ịntanetị
Ọrụ M Dere
Hazie Ihe Olili ozu
Wzọ ndị ọzọ iji nye onyinye
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na ndị nyere onyinye ugbu a
Ndị Ọrụ Afọ Ofufo Anyị
Lezienụ na Nchịkọta Ego Gị
Ndị ọgbọ Na-akwado Enyi
Nkwado Ndị Ọgbọ na Ogige Ndị Obodo
Ọrụ Nkwado Obodo Perinatal
Onye Nlekọta Nlekọta Anya
Mmekọrịta Mmekọrịta na Ndị Nkwado Ndị Gara Aga
Nlekọta Ahụike Ọgụgụ Isi
Ntinye Ndị Ọrụ
Debe Onyinye Kwa Afọ Na Ncheta
Melite ihe Na ebe nchekwa Page
Otu Inye Onyinye
Lọ Ọrụ Ọrụ Mgbasa Ọpụrụiche Specialist na mpaghara Bromley
Nkwurịta Okwu Na-aga nke Ọma na Nlekọta Anya
Ọrụ Nkwado Ọnwụ Onwe Onye
Nkwado maka Ndị Nlekọta
Nkwado maka ndị were gị n'ọrụ
Ihe BLG Mind Annual Review
Insmụ ejima na otu dị iche iche
Usoro Nsogbu Ultra
Melite ma ọ bụ mee uche gị n’efu
Atụmatụ maka ịchọta ego
Wepụta onwe gị dị ka enyi enyi mgbaka
Ọrụ afọ ofufo na Mindful Mums